LIVE Transfer Talk အာဆင်နယ်အသင်းဟာချယ်လ်ဆီး Jorginho သို့ပြန်လာပြီး - TELES RELAY
By Tele RELAY တစ်ခု On စက်တင်ဘာ 24, 2020
လိဂ် - ထူးခြားသောအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းနှင့်အတူ
၂၀၂၂ ခုနှစ်အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်း - Conceiçaoမှကစားသမား ၃၂ ဦး ကိုတစ် ဦး အပါအဝင် ...
Isco သည် Clasico ရှိ Zidane ကိုလှောင်ပြောင်နေသောကင်မရာဖြင့်ဖမ်းမိခဲ့သည်
Coronavirus ကူးစက်မှုကလွှဲပြောင်းဈေးကွက်ကိုမရေရာစေ ဒီမှာပြတင်းပေါက်ပိတ်လိုက်တာကိုမင်းတွေ့နိုင်တယ် - သို့သော်ဥရောပ၏လိဂ်ကြီးများနှင့်ကျော်လွန်ပြီးလွင့်မျောနေသောကောလာဟလများဤနေရာတွင်ရှိသည်။ နောက်ထပ်, အားလုံးနောက်ဆုံးပေါ်အဓိကပြီးစီးလွှဲပြောင်းထွက်စစ်ဆေးပါ ဥရောပတစ်လွှား။
Top Story - အာဆင်နယ်ဟာချယ်လ်ဆီးရဲ့ Jorginho ကိုပြောင်းသွားပြီ
လက်နက်တိုက် Atletico ရဲ့လိုက်ဖမ်းခဲ့ကြ သောမတ်စ် Partey နှင့် လိုင်ယွန်'' s ကို houssem Aouar သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်အဆင့်မြှင့်ရန်, ဒါပေမယ့် Sky Sports သည်ယခုသတင်းပို့သည် သူတို့ကစိတ်အားထက်သန်ကြသည် ချယ်လ်ဆီး'' s ကို Jorginho.
Jorginho သည်အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲလုံးတွင်ချယ်လ်ဆီးအသင်းကိုဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့သည် ဖရန့်လမ်းပတ်XI ။ သို့သော်ချယ်လ်ဆီးအသင်းသည်ယခုနွေရာသီတွင်ပေါင် ၂၅၀ နီးပါးအကုန်အကျခံခဲ့ပြီးအသစ်ထပ်မံဖြည့်တင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အီတလီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသည်ချယ်လ်ဆီးသို့ပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက် Maurizio Sarri ၏ပထမဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည် Naples 57.4 ခုနှစ်တွင်£ 2018m များအတွက် - မန်ချက်စတာစီးတီး (လက်ထောက်နည်းပြအဖြစ် Mikel Arteta နှင့်အတူ) လည်းသူ့ကိုဆင်းသက်ဖို့နီးကပ်လာ - နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် ဂျူဗင်တပ်စ် Sarri မတိုင်မီ Serie A ချန်ပီယံများကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်။
အာဆင်နယ်အသင်းဟာအာဆင်နယ်အသင်းအတွက် လူးကပ်စ Torreira တစ် ဦး ချေးငွေပြောင်းရွှေ့အပေါ်ပိတ်နေသည် အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်.
18.58 TSB: Ligue2၏အင်္ဂလန် Sochaux သည်အသက် ၂၉ နှစ်သာရှိသေးသည့်အလယ်တန်းနောက်ခံလူကိုလက်မှတ်ထိုးရန်အတည်ပြုလိုက်သည် Johan စစ်အုပ်ချုပ်ရေး၏အစ်ကို မန်ချက်စတာယူနိက်တက် ရှေ့သို့ အန်သိုနီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အဟောင်း Martial နှင့်အတူပူးပေါင်းရန်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Florentine Pogbaယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူ၏အစ်ကို ရှင်ပေါလု Pogba။ လူတိုင်းကဖြောင့်ထားခဲ့တာလား။ ကောင်းတယ်
Joh Johan Martial
𝘈𝘨𝘦: ၂၉ နှစ်
𝘛𝘢𝘪𝘭𝘭𝘦 ၁-၈၄# ကြိုဆိုပါတယ် pic.twitter.com/nj6luGsBwY
- FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) စက်တင်ဘာလ 24, 2020
18.35 TSB: အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ် ၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် Edinson ကာဗာနီ ယခုအပတ်အစောပိုင်းတွင်ရည်မှန်းချက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Rojiblancosလက်မှတ်ရေးထိုး ဆွာရက်ဇ် အလားတူ Cavani အပေါ်သူ၏တံခါးကိုမပိတ်နိုင်ခြင်း ဥရုဂွေး အဆိုအရစပိန်မြို့တော်အတွက်အသင်းဖော် အဆိုပါအဖွဲ့။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် Atletico များအတွက်အသစ်တစ်ခုအိမ်ရှာနိုင်ကြသည်ဆိုပါက ဒီယေဂိုကော်စတာသူတို့ဟာအရင်ကယူရို ၁၀ မီလီယံအသားတင်လုပ်အားခကိုတတ်နိုင်ကြတယ် ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်း တိုက်စစ်မှူးသည်ရှာနေသည်
17.48 TSB: ရုပ်ပုံ ကြောင်းအစီရင်ခံစာများ လီဗာပူးလ် 17 နှစ်အရွယ်စုဆောင်းရန်စိတ်ဝင်စားကြသည် ဒေါ့မွန် wunderkind Gio reyna, ဒါပေမယ့်ဂျာမန်ကုမ္ပဏီကြီးကိုတိုးချဲ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လူငယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်မှာသူအသက် ၁၈ နှစ်သာရှိသေးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူသည် Bundesliga တွင်အနာဂါတ်တွင်ဆက်လက်ရှိနေ ဦး မည်ဟုဆိုလိုသည်။
17.01 TSB: ဘာစီလိုနာယူဆောင်ပါပြီ Philippe Coutinho ဒီနှစ်နွေရာသီမှာသူ့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ပေမယ့်အာဆင်နယ်ကတော့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတုန်းပဲလို့ဆိုပါတယ် အားကစား.
အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Coutinho ဟာဘာစီလိုနာကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာလီဗာပူးလ်အသင်းမှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပေမယ့်ယူရိုသန်း ၁၆၀ ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
16.22 BST: စန်တီယာဂို Arias အပေါ် Bayer Leverkusen ပူးပေါင်းခဲ့သည် တစ်နှစ်ချေးငွေသဘောတူညီချက် ၀ ယ်ယူရန်ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ Atletico Madrid မှ။
- Bayer 04 လေဗာကူဆင် (@bayer04_en) စက်တင်ဘာလ 24, 2020
16.02 TSB: မီလန်နောက်ခံလူ ဒီယေဂို Godin ရှိပါတယ် လူမှုမီဒီယာအပေါ်သူ၏နှုတ်ဆက်ကဆိုသည် Cagliari သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၏ရှေ့တွင်
15.44 TSB: ဘာစီလိုနာသည်တိုက်စစ်မှူးကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည် ဆွာရက်ဇ် Atletico Madrid မှအခမဲ့လွှဲပြောင်းအပေါ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူ့ကိုတောင်အစားထိုးဖို့လိုသလား။
ဘာစီလိုနာသည်ရှေ့ဆက်ရန်လုံလောက်ပြီးမက်ဒရစ်နှင့်လူးဝစ်ဆွာရက်ဇ်ကိုအစားထိုးစရာမလိုဟု Sid Lowe ကပြောကြားခဲ့သည်။
15.10 TSB: မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းသည် COVID-19 ကူးစက်မှု၏ဘဏ္impactာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုအပြည့်ကိုအောက်ပါအတိုင်းအောက်တိုဘာလလယ်တွင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွင်းအသင်း၏ပေါင် ၇၅ သန်းကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့်အဆုံးမတိုင်မီ£ 100 သန်းထိပ်ဆုံးဖွယ်ရှိသည်r.
ယူနိုက်တက်သည်သူတို့၏ဘဏ္figuresာရေးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများကိုတတိယနေရာတွင်တစ်ချိန်တည်းတင်မည်ဖြစ်ပြီးthatပြီ ၁ ရက်မှဇွန် ၃၀ အထိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖုံးလွှမ်းသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက်မတ်လလယ်တွင်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း၊ ထောက်ခံသူတွေအစဉ်အဆက်ကတည်းက။
ESPN မှ Mark Ogden မှသတင်းများအရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သည်တံခါးပိတ်ကစားပွဲတွင်ပွဲစဉ်တိုင်းသည်ပေါင် ၄ သန်းမှ ၅ သန်းအကြားအရှုံးပေါ်ခဲ့ပြီးယခုအချိန်တွင်ကလပ်သည်ဗလာစင်တာများ၏ရှေ့တွင်အိမ်၌ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ဂိမ်းခုနစ်မျိုးကစားခဲ့သည်။
14.44 TSB: အချို့ကမနှစ်မြို့ဖွယ်ရာအလားအလာရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ကြသည် Lionel Messi အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် ဘာစီလိုနာ။ နံပါတ် (၁၀) သည်အမျက်ဒေါသထွက်ပြီးအသင်းအတွက်ရလဒ်ကောင်းများရရှိခဲ့သည်။ သူထပ်မံပြုလိမ့်မယ်။ သို့သော် ESPN ကကစားသမားအချို့ကနည်းပြအသစ်နှင့် Messi မပါဘဲအသစ်စတင်ခြင်းကိုလူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။
ဒါကဇာတ်လမ်းပါ - မက်ဆီသည်ဘာစီလိုနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသံသယဖြစ်ဖွယ်သံသယဖြစ်စရာများနောက်ဆုံးတွင်လျစ်လျူရှုရန်မဖြစ်နိုင်တော့သည့်အကြောင်းနှင့်နောက်ထပ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံကို - ကစားသမားနှင့်ကလပ်နှစ်ခုလုံးနှင့်နီးစပ်သောသတင်းရင်းမြစ်များမှပထမ ဦး ဆုံးကိုယ်တိုင်အကောင့်များစွာ၏အကူအညီဖြင့်ပြောကြားခဲ့သည်။
14.01 TSB: လိဒ်ယူနိုက်တက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါပြီ ရီးရဲလ် Sociedad နောက်ခံလူ Diego Llorente ဘို့ တစ် ဦး ထုတ်ဖော် fee.
အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Llorente ဟာသူ့ဘဝကိုစတင်ခဲ့တယ် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် နှင့် Elland လမ်းတွင်လေးနှစ်စာချုပ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်
✍️ #LUFC Real Sociedad မှနောက်ခံလူ Diego Llorente ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်ကြေငြာခြင်းကို ၀ မ်းသာကြသည်
- လိဒ်ယူနိုက်တက် (@LUFC) စက်တင်ဘာလ 24, 2020
13.56 TSB: ဘာလဲ မန်ချက်စတာယူနိက်တက် လုပ်ပါ ရှင်ပေါလု Pogba?
Mark Ogden ကစပိန်အသင်း၏ပွဲစဉ်တွင် Donny van de Beek သည် Paul Pogba ကိုရှေ့တန်းတင်သင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် Brighton ။
13.40 TSB: နောက်ကျောဇွန်လ သတင်းရင်းမြစ် ESPN သို့ပြောကြားခဲ့သည် ဘင်ဖီကာကာကွယ်ရေးကွင်းလယ်လူ လူးဝစ်ဌဖလော်တီနို မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နှင့်အေစီမီလန်အပါအ ၀ င်ထိပ်တန်းဥရောပကလပ်အသင်းများ၏အာရုံစိုက်မှုကိုခံခဲ့ရသည်။
အခုတော့ အဖွဲ့အစီရင်ခံစာများ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိကစားသမားသည် ၀ ယ်ယူရန်အခွင့်အလမ်းမရှိသောရာသီရှည်ချေးငွေဖြင့်မိုနာကိုသို့ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်ပြီးပြင်သစ်ကလပ်ကိုယူရို ၂ သန်းဖြင့်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
Octopus ဟုခေါ်သည့်အိုပိုလိုသည်အိုလံပစ်အားကစားကွင်း၌ကွင်းလယ်၌ဘောလုံးများအနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် Florentino သည်ပေါ်တူဂီအသင်း၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ဥရောပလက်အောက် ၁၇ နှစ်ချန်ပီယံရှစ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဥရောပ U17 ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည်။
13.13 TSB: West Ham လက်မှတ်ထိုးရန်ကြိုးစားနေကြသည် Saint-Etienne အလယ်ဗဟို ယ်စလီ Fofana ပေါင် (၃၆) သန်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Evening Standard.
Hammers သည်ဆင်းသက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နောက်ခံလူ ဂျိမ်း Tarkowskiဒါပေမယ့်ပေါင် ၄၀ အကုန်အကျခံမယ် Burnley လိုချင်တယ် ဒါကြောင့်အစား ၁၉ နှစ်သားပြင်သစ်နောက်ခံလူဖိုဖာကိုပေါင် ၂၅ သန်းတန်ကြေးနဲ့ပေါင် ၁၁ သန်းထပ်မံပြောင်းရွှေ့ဖို့အာရုံစိုက်နေပါတယ်။
Fofana လည်းဒီနွေရာသီမှာ Leicester ရဲ့ရေဒါပေါ်မှာရောက်နေတယ်။
12.37 TSB: ထံမှသွားကြဖို့နောက်ဆုံးကစားသမား မန်ချက်စတာစီးတီး's အကယ်ဒမီ ဒေါ့မွန် ခဲ့ Jadon Sancho။ ရုံပြောနေတာ။
“ Jamie Bynoe-Gittens ကငါတို့နဲ့အတူရှိနေပြီးသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ဌာနမှာပါ ၀ င်တာကို ၀ မ်းသာပါတယ်။ သူကအစ U19 ကစားသမားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကင်းထောက်ဌာနသည်အလွန်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်။ " pic.twitter.com/HXp1PkTe4y
- ဒေါ့မွန် (@BlackYellow) စက်တင်ဘာလ 24, 2020
12.22 TSB: Full- နောက်ကျော rated အာရုန်သည် Hickey အဘို့အစကော့တလန်ထွက်ခွာမည် အီတလီ, နှလုံးကနေ Serie A ဘက်သို့ရွေ့လျား Bologna.
- Bologna FC 1909 (@ BolognaFC1909en) စက်တင်ဘာလ 24, 2020
12.19 TSB: Gianluca Di Marzio ပထမ ဦး ဆုံးအစီရင်ခံခဲ့သည့်အတိုင်း Tottenham သည် Inter Milan သို့ပြန်လည်ခေါ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားနေသည် မီလန် Skriniar ဒါပေမယ့်စီးရီးအေကလပ်ကိုယူရို ၆၀ (ပေါင် ၅၃.၉ သန်း) ပေးဆောင်ရသည်။ ESPN မှ James Olley ကိုသတင်းရင်းမြစ်များကအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်.
စပါးအသင်း၏နည်းပြဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုသည်လာမည့်လတွင်အပြောင်းအရွှေ့ ၀ င်းဒိုးကိုမပိတ်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေသည်။ ဆလိုဗက်ကီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ။
သို့သော်စပါးအသင်းအနေဖြင့်ပေါင် ၂၅ သန်းဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည့်အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိကစားသမားအတွက်ကန ဦး ရာသီချေးငွေစာချုပ်ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဆာဂျီယိုReguilón မှ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် ယူဆောင်လာရန်လုပ်ခလစာပေါင် ၁၁ သန်းဝန်းကျင်ရှိသည် ဂါရတ်ဘေးလ် လန်ဒန်မြောက်ဘက်သို့။
Inter သည်သူတို့၏ယူရို ၆၀ တန်ဖိုးရှိ Skriniar တန်ဖိုးကိုစွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီး၎င်းမှာကိန်းဂဏန်းသည်စျေးကွက်ထပ်မံလှည့်လည်ရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက်မြိတ်ကစားသမားများကိုရောင်းချရန်လိုအပ်နေသောစပါးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုများတွင်အဓိကထိမိလဲစရာဖြစ်သည်။
12.02 TSB: ဘိုင်ယန်မြူးနစ် အောက်တိုဘာ ၅ ရက်တွင်ပြတင်းပေါက်မပိတ်မီအခြားကစားသမားများထပ်မံလက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ Gab Marcotti ရှင်းပြသည်.
ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက Treble အနိုင်ရခဲ့သည့်ကလပ်တစ်ခုသည်နောက်ဆုံးရာသီတွင်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည့်ကလပ်အသင်း (ရှစ်ကတ်တွင် ၈-၀ ဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခြင်းအပါအ ၀ င်) အဖွင့်ပွဲစဉ်တွင်အနိုင် ၂၂ ပွဲအနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၉ တွင်ဘားတစ်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ကစားကွက်သည်နည်းနည်းလေးတိုလိမ့်မည်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းသည်ယခုရာသီတွင်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းသို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။
အမှန်မှာ၊ ဤအဖွဲ့သည်ရာထူးများစွာတွင်တိုသည် (အနည်းဆုံး၊ သူတို့ဖြစ်ရန်လိုသည်ထက်တိုသည်) ဖြစ်သည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းမှုသည်ပြlineupနာမဟုတ်ပါ; နက်နဲတယ် ဒီဟာကမကြာသေးခင်ကသမိုင်းမှာအခက်ခဲဆုံးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့သင်စဉ်းစားမိရင်အရေးကြီးတယ်။ အကယ်၍ သူတို့ဟာချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကိုတက်သွားရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလိုလုပ်ပြီးပြန်လုပ်ဖို့မျှော်လင့်သလိုမျိုး ၂၅၃ လောက်ပဲကြာလိမ့်မယ်။ ရက်ပေါင်း။
၂၈၈ ရက်ကြာသောသူတို့၏နောက်ဆုံး COVID-19 ထိခိုက်နစ်နာသည့် ၂၀၁၈-၁၉ လှုပ်ရှားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ များသောအားဖြင့်အချိန်နည်းသောဂိမ်းများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်နည်းပါးသည်။ Bundesliga ၏လတစ်လကြာရသောဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်သည်ခရစ်စမတ်နှင့်နှစ်သစ်ကူးကာလတို့တွင်နှစ်ပတ်အတွင်းလျှော့ချပြီးနောက်နှစ်လယ်ပိုင်း၌လည်းဘက်ထရီအားပြန်သွင်းရန်အခွင့်အလမ်းမရှိနိုင်ပါ။ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအနည်းဆုံးthreeရိယာအနည်းဆုံး (၃) ခုရှိသည်။
11.27 TSB: ဘာစီလိုနာ အလယ်ဗဟို ဂျင်း Clair Todibo ဒီနွေရာသီနှင့်အပြောင်းအရွေ့နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် RMC Sport မှတင်ပြသည် ထို ဖူလ်ဟမ် အသက် ၂၀ အရွယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ယူရို ၁၈ သန်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
11.13 BSTဖြေ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ် လက်မှတ်ထိုးခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကို La Liga ခေါင်းစဉ်စိန်ခေါ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည် ဆွာရက်ဇ် ဘာစီလိုနာမှ
ESPN FC မှ Alejandro Moreno က Atletico နှင့်လူးဝစ်ဆွာရက်ဇ်တို့သည်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေခြင်းအပေါ်သာမူတည်နေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
10.45 TSB: ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီက, RB Leipzig Winger လက်မှတ်ထိုးရန်အပိုမိုင်သွားလေ၏ Ademola Lookman အဲဗာတန်မှယူရို ၁၈ မီလီယံတန်ဖိုးရှိသည်။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိကစားသမားသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အစောပိုင်းကလပ်တွင် ၆ လကြာချေးငွေစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သောဘွန်ဒစ်လီဂါကိုသဘောကျခဲ့သည်။
သို့သော်လွမ်မန်သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်အမြဲတမ်းပြောင်းရွှေ့ရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ကစားရန်ရုန်းကန်နေရသည်။ သူသည်ယှဉ်ပြိုင်မှု ၁၃ ပွဲကစားနိုင်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဂျူလီယန်နာဂelsmannလက်အောက်တွင်ပွဲ ၂ ပွဲတွင်သာစတင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်အားကစားဒါရိုက်တာ Markus Krosche ကယခုအခါအင်္ဂလိပ်လူမျိုးထွက်ခွာသွားနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
"ဒီမှာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်နေတုန်းပဲ။ Krosche ကသတင်းထောက်တွေကို" "Ademola အများကြီးကစားမထားဘူးနှင့်လူငယ်တစ် ဦး ကစားသမားတစ်နည်းနည်းနဲ့ကစားရမည်ဖြစ်သည်။ "
10.21 TSB: လိဒ်ယူနိုက်တက် ဆင်းသက်ရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည် Levant ကွင်းလယ်ကစားသမား Jose campanaပရီးမီးယားလိဂ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စိတ်အားထက်သန်နေသည့်ကစားသမားနှင့်အတူ Onda Deportiva.
ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်သည် (၂၃) နှစ်အရွယ် Levante အသင်းနှင့် (၂၀၂၃) ဇွန်အထိချန်ပီယံယူရို (၁၈) သန်းအထိပေးချေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
Levante သည် Campana ကိုယူရို ၃၀ ဖြင့်သာရောင်းချရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။ စပိန်အသင်းသည်ဂိုး ၂ ဂိုးနှင့်လီဗာပူးအတွက် ၃၇ ပွဲတွင် ၇ ပွဲဆက်တိုက်သွင်းယူနိုင်ခဲ့သည်။
10.05 TSB: ချယ်လ်ဆီး ရှိ လွှဲပြောင်းပြီးစီးခဲ့သည် ဂိုးသမား Edouard Mendy ငါးနှစ်စာချုပ်အပေါ် Rennes ကနေ။
တရားဝင်ပဲ! Edouard Mendy ဟာအပြာရောင်ပဲ။ ✍️🔵#WelcomeMendy
- ချယ်လ်ဆီး FC (@ChelseaFC) စက်တင်ဘာလ 24, 2020
Mendy ၏ရောက်ရှိမှုကဖိအားကိုတိုးစေသည် Kepa Arrizabalaga ချန်ပီယံတနင်္ဂနွေရဲ့ 2-0 ရှုံးနိမ့်၌သူ၏အမှားအောက်ပါ လီဗာပူးလ် ပရီးမီးယားလိဂ်၌။
"ကျွန်တော်ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ၀ င်ရောက်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်" ဟု၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ထဲပါ ၀ င်ဖို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော့်အတွက်အိပ်မက်တစ်ခုပါ ဖရန့်လမ်းပတ် နှင့်သူ၏နည်းပြဝန်ထမ်းအားလုံး။ ကျွန်ုပ်၏အသင်းဖော်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့်ပြီးစတင်ရန်မစောင့်နိုင်ပါ။ "
ချယ်လ်ဆီးဒါရိုက်တာ Marina Granovskaia က "မကြာခင်မှာပဲ Petr ကရရှိသွား နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့က Edouard အားကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိအဖွဲ့ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အသင့်တော်ဆုံးဂိုးသမားအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သွင်းလိုသောကစားသမားတစ် ဦး တည်းသာရှိသည်။ Edouard သည် Rennes နှင့်အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးရာသီတွင်ရောက်ရှိလာသည်၊ သူသည်ပိုမိုရည်မှန်းချက်ကြီးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကလပ်ကိုကြိုဆိုသည်။ "
09.50 TSB: ဂျာမနီ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားသူရဲကောင်း မာရီယို Gotze Dortmund မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးသူဟာအသင်းအသစ်မှာပါဝင်ရန်မရှိသေးပါဘူး။
မကြာသေးမီကအေးဂျင့်များပြောင်းလဲခြင်း၊ ယခုနှစ်သူ၏ဒုတိယအေဂျင်စီများပြောင်းလဲခြင်းသည်သူ့ကိုလွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဂျာမန်စာပေအချို့တွင်ခေါင်းစဉ်များသို့ပြန်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ Gotze သည်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းသို့ (၂၀၁၃) ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးသူသည် Dortmund အသင်းမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၆ တွင် Dortmund သို့ထွက်ခွာသွားနိုင်ကြောင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။
ဘိုင်ယန်နည်းပြ Hansi Flick သည် Gotze နှင့်ဖုန်းပြောပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဘိုင်ယန်နဲ့ဆီဗီလာတို့အကြားဘူဒါပတ်စ်မှာကျင်းပတဲ့ဥရောပစူပါဖလားအကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Flick ကသတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်“ သူကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြanနာမဟုတ်ပါဘူး။ "
09.31 TSB: သင့် ဒိလီမဟာမိတ်များ ဒီနွေရာသီမှာစပါးအသင်းကို
Mark Ogden က Dele Alli ကို Tottenham မှပြောင်းရွှေ့ရန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောကောလာဟလများကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။
08.58 TSB: Ansus Fati၏ဖြန့်ချိသည့်အပိုဒ်သည်ယူရို ၄၀၀ အထိအလိုအလျောက်တိုးပွားလာသည် ဘာစီလိုနာပြီးနောက်တရားဝင်လာမည့်ရာသီအတွက်ပထမအသင်းကိုသူ့ကိုရာထူးတိုး
အသက် ၁၇ နှစ်ရှိဖီတီသည်ပြီးခဲ့သည့်ရာသီကပြိုင်ပွဲအားလုံးတွင်ဂိုးရှစ်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်မည်သည့်ကစားသမားမျှအမှန်တကယ်ကစားခြင်းမရှိသော်လည်း B အသင်းသို့မှတ်ပုံတင်ထားခဲ့သည်။
သူ၏ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများကြောင့်သူသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိစာချုပ်အသစ်တစ်ခုရရှိခဲ့ပြီးသူ၏အပုဒ်တွင်ယူရို ၁၀၀ မှယူရို ၁၇၀ အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။
သို့သော်၎င်းသဘောတူညီမှု၏စည်းမျဉ်းများအရသူသည်ပထမအသင်းကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ယူရို ၄၀၀ မှနှစ်ဆထက်ပိုများလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
Fati သည်ယခုအပတ်မှဖယ်ရှားလိုက်သောနံပါတ် ၂၂ ရှပ်အင်္ကျီကိုအမွေခံရမည် အာတူရို Vidalအင်တာမီလန်မီလန်သို့ရောက်ရှိခဲ့သူ။ သူသည် Camp Nou တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ချီလီကွင်းလယ်ကစားသမားနှင့်နီးစပ်ခဲ့သည်။
08.26 TSB: ဒါဝိဒ်သည် Alaba ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်း၏နောက်ဆုံး ၁၂ လတာကာလအတွင်းချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားများကိုအောက်တိုဘာ ၅ ရက်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချိန်မတိုင်မီဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည့်စာချုပ်သစ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
သီအိုရီအရဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်း၏အဓိကကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည့်အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ကစားသမားကိုစိတ်ဝင်စားသည့်ဥရောပအဓိကကလပ်အသင်းများရှားပါးလာလိမ့်မည်။
သို့သော်မည်သည့်ကလပ်အသင်းမှမရာဘာအားယူရို ၂၀ သန်းဒေသတွင်နှစ်စဉ်လစာပေးရရုံသာမကသိသာသောအခကြေးငွေအတွက်ယူရို ၆၀ ဝန်းကျင်ပေးရသည်။ သြစတြီးယား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ, kicker သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
- Marcotti: ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းသည် Treble ကိုကာကွယ်ရန်အလွန်ပါးလွှာနေသလား။
08.00 TSB: Atletico Madrid အသင်းဟာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုပိုမိုအားကောင်းလာအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဆွာရက်ဇ် ဘာစီလိုနာမှ, နှစ် ဦး စလုံးကလပ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်းတွင်ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါကလပ်ကလပ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည် ဥရုဂွေး တိုက်စစ်မှူးသည်စပိန်မြို့တော်သို့ထွက်ခွာပြီးကြာသပတေးနေ့တွင်နှုတ်ဆက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
အသက် ၃၃ နှစ်ရှိ Suarez သည် Atletico အသင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်စတာလင် (၆) သန်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ကြေးဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်း (၅၀) ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်စတာလင် (၃.၅) သန်းဖြင့်ခေါ်ယူရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။
ဒီသဘောတူညီချက်ဟာ ၂ နှစ်လောက်ကြာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်၊
Atletico နည်းပြ Diego Simeone သည် Suarez ကိုပြောင်းရွှေ့ရန်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဂျူဗင်တပ်စ် အင်္ဂါနေ့ကချေးငွေအပေါ်။
အဆိုပါ Rojiblancosဘာစီလိုနာသည် coronavirus ကပ်ရောဂါကြောင့်ဘဏ္uncertainာရေးဆိုင်ရာမသေချာမရေရာမှုတွင်ရှိနေပြီးကစားသမားအသစ်များကိုမလက်မှတ်ထိုးမီ၎င်းတို့၏လုပ်အားခဥပဒေကြမ်းတွင်နေရာယူထားရန်လိုအပ်သည်။
Gab Marcotti သည် Chelsea မှ Antonio Rudiger နှင့် Callum Hudson-Odoi တို့၏အနာဂတ်ကိုစစ်ဆေးသည်။
PAPER Talk (Danny Lewis မှ)
ဘာစီလိုနာ၊ ရိုးမားနှင့် PSG တို့သည် Rudiger ကိုကြည့်နေသည်
• ကူပါ လွှဲပြောင်းအပေါ် Coronavirus '' သက်ရောက်မှု
• Barnwell ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေ့လျားမှု: 100-51 | 50-1
ဒါဟာပြီးသားအစီရင်ခံထားသည် ချယ်လ်ဆီး ရောင်းလိုကြသည် အန်တိုနီယို Rudiger သူသည်ဖရန့်လမ်းပတ်၏ဗဟိုနောက်ခံ pecking အမိန့်ကိုချကျဆင်းသွားပြီးနောက်။ သို့သော်အသင်းသို့ခေါ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားနေသောကလပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် ဂျာမနီ ချေးငွေအပေါ်နိုင်ငံတကာ။
Kicker အမည်ရှိထားပါတယ် ဘာစီလိုနာ နှင့် ရိုးမား AS သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေသောကလပ်နှစ်ခုကဲ့သို့ The Daily Mail က ကြောင်းအစီရင်ခံစာများ ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်း ပြီးနောက်နောက်ခံလူလိုပေမည် Thiago Silva အခြားလမ်းသို့သွားကြ၏။
သူသည် Stamford Bridge တွင်အပယ်ခံဖြစ်သော်လည်း Rudiger သည်ရွေးချယ်စရာများနည်းပါးနေပုံရသည်။
Man City ကို Gimenez တိုးချဲ့ရန်တောင်းဆိုခြင်း
မန်ချက်စတာစီးတီး လက်မှတ်ထိုးစိတ်ဝင်စားမှုပြသခဲ့ကြသည် အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ် အလယ်ဗဟို ဟိုဆေး Gimenezဥရုဂွေးနိုင်ငံသည် Coronavirus ဆေးကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်တွင်၎င်းသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာခဲ့သည်။
သူသည်အထီးကျန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် Gimenez သည်အောက်တိုဘာ ၅ ရက်မတိုင်မှီဆေးကုသမှုခံယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း The Daily Star စီးတီးမျှော်လင့်ချက်အရှုံးမပေးကြပြီမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
FIFA အနေဖြင့်ဆေးကုသမှုကိုလုံခြုံစွာပြီးစီးနိုင်စေရန် FIFA အနေဖြင့်စာချုပ်ကိုလွှဲပြောင်းရန်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မန်စီးတီးသည်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်နောက်နောက်ခံလူကိုဤ ၀ င်းဒိုးသို့ခေါ်ဆောင်လာပြီးနောက်၎င်းသည်၎င်းသည်လာသည် နာသန် Ake £ 41m များအတွက် AFC Bournemouth ကနေ။
Gianluca Di Marzio ကြောင်းအစီရင်ခံထားပါတယ် တင်ဟမ်ဟော့စပါး လက်မှတ်ထိုးရန်သဘောတူညီချက်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေကြသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလယ်ဗဟို မီလန် Skriniar.
အီတလီကုမ္ပဏီကြီးများသည်ယူရိုသန်း ၆၀ ဖြင့်ရောင်းချနေပြီး၎င်းမှာစပါးအနေဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ငွေမပေးလိုခြင်းဖြစ်သည်။
Skriniar သည်ပြောင်းရွှေ့ရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားကြောင်းယူရို ၅၀ နှင့်အပိုထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုသဘောတူညီမှုရရန်မျှော်လင့်ကြောင်းအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အကယ်၍ ပြောင်းရွေ့မှုပြီးဆုံးပါက Inter သည်လက်မှတ်ထိုးရန်ကြိုးစားလိမ့်မည် Fiorentina'' s ကို Nikola Milenkovic သူ့ကိုအစားထိုးဖို့, မဟုတ်ရင်, အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ် ခရစ်စမောလင်းထွက်ခွာရန်သေချာပုံရသည် မန်ချက်စတာယူနိက်တက် ပြီးခဲ့သည့်ရာသီချန်ပီယံလိဂ်တွင်ရှိခဲ့သောရိုးမားသို့အမြဲတမ်းပြောင်းရွှေ့ရန်သဘောတူညီမှုမရရှိသေးပါ။
- Nacho ဖာနန်ဒက်ဇ ထွက်ခွာနိုင်ပါတယ် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် လွှဲပြောင်းနောက်ဆုံးနေ့မတိုင်မီနှင့် AS သူ၏အေးဂျင့်ဖြစ်သူ Juanma Lopez ကိုစုစည်းသောအခါသူ၏ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာသည် Serie အေဖြစ်သည်ဟုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည် Alvaro Morata ရဲ့သဘောတူညီချက် ဂျူဗင်တပ်စ်သတင်းများအရသူသည်နောက်ခံလူအတွက်အလားအလာကောင်းများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Juventus, Naples နှင့်ရိုမာတို့ကိုလက်ရှိလက်မှတ်ထိုးရန်စိတ်ဝင်စားမှုပြသနေသည့်အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည် စပိန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ။
- Marseille ၏ရေရှည်အထင်ကြီးလေးစားခဲ့ကြပြီ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ကွင်းလယ်ကစားသမား မိုက်ကယ်အစားအစာ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကအခုကနေယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသည် လိဒ်ယူနိုက်တက်။ ဒါကအရသိရသည် ခြေလျင် MercatoMarcelo Bielsa သည်ပြင်သစ်လူမျိုးအားအဲလန်လမ်းသို့ခေါ်ဆောင်ရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ကြောင်းနှင့်လီစ်စ်သည်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဘဏ္financialာရေးအခက်အခဲများကြောင့် Marseille သည်ကွင်းလယ်လူကိုချေးငှားရန်သာမျှော်လင့်နေသည်။
- Watford နှင့် ဗလင်စီယာ Hornets ကွင်းလယ်လူအတွက်သဘောတူညီမှုတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများရှိနေသည် Etienne Capoueအစီရင်ခံစာများ အဆိုပါ Watford Observer။ ပြင်သစ်နှင့်အတူ ရောဘတ် Pereyra, အပြောင်းအရွှေ့တောင်းခံပြီးနောက်ဗလာဒီမာ Ivic ရဲ့ matchday ကစားသမားမဟုတ်ပါဘူး။ Watford ကသူ့ကိုလုံးလုံးရောင်းချင်ပါတယ်၊ Valencia ကသူတို့ရဲ့ဘဏ္financialာရေးအခြေအနေကြောင့်ချေးငွေလိုချင်တယ်၊ ဆိုလိုတာကသဘောတူညီချက်မရသေးဘူး။
ဤဆောင်းပါးသည် http://espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/4189610/live-transfer-talk-manchester-city-seek-deadline-extension-to-sign တွင်ပထမဆုံး (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) ပေါ်လာသည်။ -atleticos-gimenez
Landrieu: Will Smith ရိုက်ချက်သည်မြို့၏လုံခြုံရေးကိုမရောင်ပြန်ဟပ်ပါ - ဗီဒီယို
လိဂ် - LFPC ၏ထူးခြားသောအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းနှင့်အတူဘောလုံး ...
၂၀၂၂ CAN - ခြေစစ်ပွဲ - Conceiçaoသည် "ndolé" ကစားသမားတစ် ဦး အပါအဝင်ကစားသမား ၃၂ ဦး ကိုဆင့်ခေါ်သည်
Lions A '- Martin Ntoungou Mpile သည်မီးသတ်သမား။ - ဘောလုံးစကားပြောကြပါစို့ 237